DEG DEG: Kenya oo si rasmi ah u codsatay in dib loo dhigo dhageysiga dacwadda badda iyo Soomalia oo gaashanka ku dhiffatay Codsiga. – Xeernews24
DEG DEG: Kenya oo si rasmi ah u codsatay in dib loo dhigo dhageysiga dacwadda badda iyo Soomalia oo gaashanka ku dhiffatay Codsiga.
3. September 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Dowladda Kenya ayaa waxay si rasmi ah uga dalbatay Maxkamadda Cadaaladda Aduunka ee ICJ in ay dib u dhigto dhageysiga dacwadda badda ee kala dhaxeysa Soomaaliya, sidda ay sheegeyso warbaahinta dalkaasi.
Xukuumadda Nairobi ayaa waxay qiil ka dhiganeysaa in ay u baahan tahay waqti kale oo dheeraad ah taasi oo ay ku qorato kooxdeeda difaaca ee uga qeybgasha dooda oo loo madalsan yahay dhowaan.
Ma cadda xaqiiqadda qiilka ay ka timaadey Kenya, iyo hadii uu yahay isku day ay ku dooneyso in ay waqtiga ku lumiso.
Balse waxa uu kusoo aadayaa iyadda oo sharciyaqaano wadankaasi u dhashay ay kula talinayeen dowladooda in ay baxdo dacwadda oo dhan.
Maxkamadda ICJ ayaa horey uga dhawaajisay in ay bilaabeyso dhageysiga gal-dacwadeedkan 9-ka bisha September ee sanadkan, isla markaana ay socon doonto illaa iyo 13-ka bishaasi.
Kadib dhageysigaan ayaa qorshuhu wuxuu yahay in maxkamadda ay kasoo saarto go’aan kama dambeys ah, hadii uusan isbedel gedaal ka imaanin, oo aysan Maxkamaddu aqbalin soo jeedinta Kenya.
Balse Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxay si rasmi ah uga hor-timid dalab ka yimid Kenya oo ku aadan in dib loo dhigo dhageysiga dacwadda badda ee loo muddeeyay 9-ka bishan September.
Xukuumadda Nairobi ayaa waxay ku doodey in ay u baahan tahay waqti dheeraad ah oo ay kusoo qorato kooxdeeda difaaca, sidaasi darteedna ay u dooneyso in la bedelo taariikhda horey u shaacisay ICJ.
Illo wareedyo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa u sheegay laanta Af Soomaaliga ee VOA-da in soo jeedinta Kenya ay tahay mid waqti lumis ah, sidaasi darteedna ay dooneyso in aanan waxba laga bedelin dacwadda.
Kenya ayaa tan iyo markii dacwadda loo gudbiyey ICJ waxay dooneysay in qaab wada hadal ah lagu dhameeyo arrintan, taasi oo ay ka diidey xukuumadda Muqdisho oo sheegtay in ay maxkamada ku qanacsan tahay.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/02/somali-and-kenya.png 146 345 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-09-03 20:08:142019-09-03 20:08:14DEG DEG: Kenya oo si rasmi ah u codsatay in dib loo dhigo dhageysiga dacwadda badda iyo Soomalia oo gaashanka ku dhiffatay Codsiga.
OPEN LETTER TO THE ETHIOPIAM PRIME MINISTER Kornayl Muuse Biixi oo qaab seedinimo loogu soo dhaweeyay Jabuuti (aaway calanki...